ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူလဲ မသိဘူး၊ဒီမှာလူမျိုးနာမည်ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ နဲ့နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြား မြန်မာအစိုးရထုတ်ပေး … | Danya Wadi
»သတင်းများ»ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူလဲ မသိဘူး၊ဒီမှာလူမျိုးနာမည်ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ နဲ့နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြား မြန်မာအစိုးရထုတ်ပေး …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူလဲ မသိဘူး၊ဒီမှာလူမျိုးနာမည်ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ နဲ့နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြား မြန်မာအစိုးရထုတ်ပေး …
Posted by danyawadi on December 21, 2012 in သတင်းများ
Joseph Crowly‘s photo.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူလဲ မသိဘူး လေ့ ၊ ဒီ မှာ လူမျိုး နာမည် ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာနဲ့နိုင်ငံသား စိစစ် ရေး ကတ်ပြား မြန်မာ အစိုး ရ ထုတ်ပေးခဲ့ ၊ Daw Su tongued out that she don’t know who are Rohingyas,even Myanmar government issued this name in ID. So, here isacopy to evidence that Rohingyas are being obtained Citizen Scrutiny Cards naming with Rakhine Rohingya.
← ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်း အဝေး ကျင်းပ
OIC selects special envoy to Burma →
One comment on “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူလဲ မသိဘူး၊ဒီမှာလူမျိုးနာမည်ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ နဲ့နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြား မြန်မာအစိုးရထုတ်ပေး …”
yooetar December 23, 2012 at 2:48 pm	Reply